မတူညီတဲ့ ကလပ္(၃)သင္းမွာ ဂႏၳ၀င္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကစားသမားမ်ား အပုိင္း(၂)
17 Nov 2018 . 12:20 AM
Luis Suarez – Ajax, Liverpool and Barcelona
ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ မပီသတဲ့ အျပဳအမူေတြေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရေပမယ့္လည္း လူး၀စ္ဆြာရက္ဇ္ Luis Suarez ရဲ႕ေျခစြမ္းက ထိပ္တန္းအဆင့္မွာ ရွိတယ္ဆုိတာ ဘယ္သူမွ မျငင္းႏုိင္ပါဘူး။ ဂ႐ိုနင္ဂန္အသင္းကလဲြၿပီး ကစားခဲ့တဲ့ ကလပ္တိုင္းမွာ ဆုဖလားေအာင္ျမင္မႈေတြ ရယူခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္း Skill ၊ အလိမ္အေခါက္၊ Agility ၊ Finishing Skill စတဲ့အပုိင္းေတြမွာ ဘာမွေျပာစရာမလုိတဲ့ ဆြာရက္ဇ္ဟာ ကစားသမားဘ၀က အနားမယူခင္မွာပဲ ဂႏၳ၀င္တစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသူလည္းျဖစ္ပါတယ္။
Ajax-Eredivisie: 2010–11၊ KNVB Cup: 2009–10
Liverpool – Football League Cup: 2011–12
Barcelona – La Liga: 2014–15, 2015–16, 2017–18
Clarence Seedorf – Ajax, Real Madrid and AC Milan
ေဘာလုံးေလာကရဲ႕ Genius Midfielder စာရင္းမွာ မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရမယ့္သူပါပဲ။ ဆီးေဒ့ါဖ္ Clarence Seedorf ဟာ ကြင္းလယ္ေနရာစုံ ကစားႏုိင္တဲ့ Versatile Player ျဖစ္ၿပီး Strength, Pace, Stamina အျပင္ တိုက္စစ္၊ ခံစစ္ (၂)ခုစလုံးမွာ အားနည္းခ်က္မရွိတဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ေဘာလုံးသမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ထာ၀ရအေကာင္းဆုံး ကြင္းလယ္လူဆုိတာ ေအဂ်က္စ္၊ ရီးယဲလ္၊ ေအစီမီလန္တို႔နဲ႔အတူ ရယူခဲ့တဲ့ ဆုဖလားေတြကုိ ၾကည့္ရင္ သိႏုိင္မွာပါ။
Ajax – Eredivisie (2): 1993–94, 1994–95
Real Madrid-La Liga (1): 1996–97
Milan – Serie A (2): 2003–04, 2010–11
Rui Costa – Benfica, Fiorentina and Milan
ေပၚတူဂီအသင္း ကြင္းလယ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့တ့ဲ ႐ူအီေကာ္စတာ Rui Costa ကုိ ပရိသတ္ေတြ မွတ္မိၾကဦးမယ္ထင္ပါတယ္။ No 10 Role မွာ အေကာင္းဆုံး အသုံးေတာ္ခံခဲ့တဲ့ ႐ူအီေကာ္စတာဟာ ဂုိးသြင္းစြမ္းရည္ေကာင္းတဲ့အျပင္ Vision ၊ ဂုိးသြင္းခြင့္ဖန္တီးမႈ အပုိင္းေတြမွာ သူမတူေအာင္ ထူးျခားေကာင္းမြန္တဲ့ သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။
Benfica -Primeira Liga: 1993–94
Fiorentina -Coppa Italia: 1995–96, 2000–01
Milan – Serie A: 2003–04
Thierry Henry – Arsenal, Barcelona and New York Red Bulls
ျပင္သစ္ဂႏၳ၀င္ႀကီး အြန္နရီ Thierry Henry ရဲ႕ ေျခစြမ္းနဲ႔ ကစားသမားဘ၀ ေအာင္ျမင္မႈေတြကေတာ့ ပရိသတ္ေတြလည္း သိၿပီးသားျဖစ္ေလာက္မွာပါ။ အာဆင္နယ္အသင္းနဲ႔ ပရီးမီးယားလိဂ္၊ FA ဖလားေတြ ရယူခဲ့ၿပီး ၂၀၀၄-၀၅ ရာသီမွာ အသင္းသမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဗုိလ္လုပဲြေရာက္ေအာင္ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ဘာစီလုိနာအသင္းမွာ ဒဏ္ရာျပႆနာေၾကာင့္ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရတဲ့အခ်ိန္ရွိေပမယ့္ အဓိက ဆုဖလားအခ်ိဳ႕ ရယူခဲ့တဲ့အျပင္ ကစားသမားဘ၀ အဆုံးသတ္ပုိင္းမွာလည္း နယူးေယာ့ခ္ရက္ဒ္ဘူးလ္အသင္းအတြက္ ထုိက္သင့္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ ရယူခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။
Arsenal– Premier League: 2001–02, 2003–04
Barcelona – La Liga: 2008–09, 2009–10
New York Red Bulls – Supporters’ Shield: 2013
Edwin van der Sar – Ajax, Fulham and Manchester United
ဂုိးသမားေတြထဲမွာ ႀကီးႀကီးမားမား ေအာင္ျမင္မႈရယူခဲ့သူေတြက သိပ္အမ်ားႀကီး မရွိပါဘူး။ အဲဒီထဲမွာမွ ဗန္ဒါးဆား Edwin Van Der Sar က တစ္ဦးအပါအ၀င္လုိ႔ ေျပာရမယ္။ ေအဂ်က္စ္၊ မန္ယူအသင္းတို႔နဲ႔အတူ ခ်န္ပီယံလိဂ္(၂)ႀကိမ္ ရခဲ့ၿပီး ခ်ီးက်ဴးရမွာက ဖူလ္ဟမ္လုိအသင္းမ်ိဳးနဲ႔ UEFA Intertoto Cup ရခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေဘာလုံးသမားဘ၀ ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)နီးပါးအတြင္း ဆုဖလား(၂၅)ခုအထိ ရယူခဲ့တဲ့ ဗန္ဒါဆားလုိ ဂုိးသမားမ်ိဳးက ေနာက္ထပ္ေပၚထြက္လာဖုိ႔ ခဲယဥ္းပါတယ္။
Ajax– Eredivisie: 1993–94, 1994–95, 1995–96, 1997–98
Fulham – UEFA Intertoto Cup: 2002
Manchester United -Premier League: 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11
Photo:The Korea Times,Twitter,Goal.com,SPORTbible,Sports Illustrated,Sportskeeda
မတူညီတဲ့ ကလပ်(၃)သင်းမှာ ဂန္ထဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားများ အပိုင်း(၂)
ကလပ်အသင်းတစ်သင်းမှာ ဂန္ထဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရဖို့ဆိုတာက တကယ်မလွယ်တဲ့အရာပါ။ အသင်းအတွက် ခြေစွမ်းပြနိုင်ဖို့လိုသလို၊ ဆုဖလားအောင်မြင်မှုတွေ ရဖို့လည်း လိုအပ်တယ်။ ကလပ်တစ်သင်းတည်းမှာ ဂန္ထဝင်ဖြစ်ခွင့်ရဖို့တောင် ခက်ခဲနေချိန်မှာ မတူညီတဲ့ ကလပ်(၃)သင်းမှာ ဂန္ထဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရရင်တော့ မယုံနိုင်လောက်အောင် ခမ်းနားတဲ့အောင်မြင်မှုလို့ပဲဆိုရတော့မယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလို ခမ်းနားတဲ့အောင်မြင်မှုကို ရယူခဲ့သူတွေ ရှိခဲ့ကြတယ်။ သူတို့က ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ . . .
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မပီသတဲ့ အပြုအမူတွေကြောင့် ဝေဖန်ခံခဲ့ရပေမယ့်လည်း လူးဝစ်ဆွာရက်ဇ် Luis Suarez ရဲ့ခြေစွမ်းက ထိပ်တန်းအဆင့်မှာ ရှိတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။ ဂရိုနင်ဂန်အသင်းကလွဲပြီး ကစားခဲ့တဲ့ ကလပ်တိုင်းမှာ ဆုဖလားအောင်မြင်မှုတွေ ရယူခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်း Skill ၊ အလိမ်အခေါက်၊ Agility ၊ Finishing Skill စတဲ့အပိုင်းတွေမှာ ဘာမှပြောစရာမလိုတဲ့ ဆွာရက်ဇ်ဟာ ကစားသမားဘဝက အနားမယူခင်မှာပဲ ဂန္ထဝင်တစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘောလုံးလောကရဲ့ Genius Midfielder စာရင်းမှာ မဖြစ်မနေထည့်သွင်းရမယ့်သူပါပဲ။ ဆီးဒေ့ါဖ် Clarence Seedorf ဟာ ကွင်းလယ်နေရာစုံ ကစားနိုင်တဲ့ Versatile Player ဖြစ်ပြီး Strength, Pace, Stamina အပြင် တိုက်စစ်၊ ခံစစ် (၂)ခုစလုံးမှာ အားနည်းချက်မရှိတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက် ထာဝရအကောင်းဆုံး ကွင်းလယ်လူဆိုတာ အေဂျက်စ်၊ ရီးယဲလ်၊ အေစီမီလန်တို့နဲ့အတူ ရယူခဲ့တဲ့ ဆုဖလားတွေကို ကြည့်ရင် သိနိုင်မှာပါ။
ပေါ်တူဂီအသင်း ကွင်းလယ်ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရူအီကော်စတာ Rui Costa ကို ပရိသတ်တွေ မှတ်မိကြဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ No 10 Role မှာ အကောင်းဆုံး အသုံးတော်ခံခဲ့တဲ့ ရူအီကော်စတာဟာ ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ကောင်းတဲ့အပြင် Vision ၊ ဂိုးသွင်းခွင့်ဖန်တီးမှု အပိုင်းတွေမှာ သူမတူအောင် ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်သစ်ဂန္ထဝင်ကြီး အွန်နရီ Thierry Henry ရဲ့ ခြေစွမ်းနဲ့ ကစားသမားဘ၀ အောင်မြင်မှုတွေကတော့ ပရိသတ်တွေလည်း သိပြီးသားဖြစ်လောက်မှာပါ။ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်၊ FA ဖလားတွေ ရယူခဲ့ပြီး ၂၀၀၄-၀၅ ရာသီမှာ အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲရောက်အောင် ပို့ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်းမှာ ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့် ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ရှိပေမယ့် အဓိက ဆုဖလားအချို့ ရယူခဲ့တဲ့အပြင် ကစားသမားဘ၀ အဆုံးသတ်ပိုင်းမှာလည်း နယူးယော့ခ်ရက်ဒ်ဘူးလ်အသင်းအတွက် ထိုက်သင့်တဲ့ အောင်မြင်မှု ရယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ဂိုးသမားတွေထဲမှာ ကြီးကြီးမားမား အောင်မြင်မှုရယူခဲ့သူတွေက သိပ်အများကြီး မရှိပါဘူး။ အဲဒီထဲမှာမှ ဗန်ဒါးဆား Edwin Van Der Sar က တစ်ဦးအပါအဝင်လို့ ပြောရမယ်။ အေဂျက်စ်၊ မန်ယူအသင်းတို့နဲ့အတူ ချန်ပီယံလိဂ်(၂)ကြိမ် ရခဲ့ပြီး ချီးကျူးရမှာက ဖူလ်ဟမ်လိုအသင်းမျိုးနဲ့ UEFA Intertoto Cup ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘောလုံးသမားဘ၀ နှစ်ပေါင်း(၃၀)နီးပါးအတွင်း ဆုဖလား(၂၅)ခုအထိ ရယူခဲ့တဲ့ ဗန်ဒါဆားလို ဂိုးသမားမျိုးက နောက်ထပ်ပေါ်ထွက်လာဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။